UDJ Sphe ukhuliswe ukusakaza kwiGagasi FM
UMSAKAZI weGagasi FM, uDJ Sphe, uthe kumkhulisile ekusakazeni ukungena kulo msakazo
THOKOZANI NDLOVU | May 10, 2020
UKUQASHWA kwiGagasi FM uthi kumkhulisile emkhakheni wokusakaza uDJ Sphe (29) oshayela uhlelo lwasekuseni ngoMgqibelo, iThe Breakfast Gang kulo msakazo.
USphe owayesehlale iminyaka eyisikhombisa kwiVibe FM, uthe ukungena kwiGagasi kumfundise okuningi ngendlela abebuka ngayo umsakazo.
Ushayela uhlelo lwasekuseni ngokubambisana noHope Mbhele, kusuka ngo-7 kuya ku-10 ngoMgqibelo. Uphinde ashayele iSunday Chill Zone kusuka ngo-2 kuya ku-6 ntambama.
Uthe ngesikhathi efika kwiGagasi ufunde ukuthi kumele ubafunde abalaleli bakho nokuthi kumele ubaqonde abantu obasakazelayo ukuze uhambisane nabo.
“Izinto azifani nhlobo nendlela ebengizenza ngayo ngisekwiVibe FM.
Lokho kungifundise ukuthi ngizihluphe ngokuthi ngazi ukuthi abantu bafunani nokuthi yini ezobajabulisa ngohlelo lwami. Lokho ngingathi ngikwenze ngempumelelo njengoba ohlelweni lwami ngifike ngafaka isihloko esithi Letter to my ex.
Kusona ngisuke nginika abalaleli ithuba lokuthi bafune izinto zabo ababeziboleke abantu babo besathandana abangakwazanga ukuzithatha sebehlukana. Indlela abantu abasithokozela ngayo lesi sihloko yenza ngibone ukuthi ngisayibambe ngakho,” kusho uDJ Sphe.
“Ngiphinde ngibheke nezinye izinto ezihamba phambili ngaleso sikhathi ngoba umsakazo ngoba kumele ngisondele kubantu.”
UDJ Sphe odabuka eMnambithi, uthe ukusakaza yinto ayithanda kusukela esemncane futhi akakaze azibone enza omunye umsebenzi ngaphandle kwakho.
Uthe ubeze alingisele abasakazi esemncane wagcina eseziqopha ngeselula esakaza ngoba yinto abevele eyifuna kusukela kudala. KwiVibe FM usebenze kuzona zonke izinhlelo, wathi nakwiGagasi useyafisa ukuthola ezinye njengolwasemini kusukela ku-12 kuya ku-3 ntambama.
Emsakazweni uthe uzimisele ngokukhula kakhulu njengoba enesifiso sokuthi ngelinye ilanga abe wumphathi wezinhlelo kulona iGagasi FM.
Ngaphandle kokusakaza, uDJ Sphe uphinde abe semculweni. Uneculo ake walikhipha, iNo Limit apike kulona uBob Easy, kanti kumanje kukhona elisha athe uzolikhipha maduze lama-piano.
Emfundweni uthe uneziqu zobuntatheli azithole e-Icesa.
Ophethe ezokuxhumana kwiGagasi FM uKhulekani Shandu uthe uSphe ukhombise ukuzimisela nokuzikhandla okukhulu. “Sikholwa wukuthi uzoqhubeka nokufaka umdlandla nakulolu hlelo lwasekuseni aselutholile,” kusho uKhulekani othe bamfisela okuhle kodwa kule ndima kaqed’ isizungu.